CSS3 ထောင့်များ၊ Gradients၊ Shadows နှင့်အခြားအရာများ ... | Martech Zone
ကက်စကိတ်စတိုင်များ အကြောင်းအရာကိုဒီဇိုင်းနှင့်အလွယ်တကူခွဲခြားရန်သင့်အားမယုံနိုင်လောက်အောင်နည်းပညာဖြစ်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည် hard-coded sites များနှင့် interfaces ရှိသည့်ကုမ္ပဏီများနှင့်အလုပ်လုပ်ဆဲဖြစ်ပြီး developer များအားမည်သည့်ပြင်ဆင်မှုကိုမဆိုပြုလုပ်ရန်အားပေးသည်။ သင်၏ကုမ္ပဏီတည်ရှိရာဒေသဖြစ်ပါကသင်၏ဖွံ့ဖြိုးရေးအဖွဲ့ကိုအော်ဟစ်ရန်လိုအပ်သည် (သို့မဟုတ်အသစ်တစ်ခုရရန်) ။ CSS ကိုစတင်ထုတ်လုပ်ခြင်းသည်လွန်ခဲ့သော ၁၄ နှစ်ကဖြစ်သည်။ အခုငါတို့တတိယအကြိမ်လှည့်လည်နေပြီ CSS3.
CSS3 ကိုယခုအခါပေါ်ပြူလာဖြစ်သောပေါ်ပြူလာဘရောက်ဇာများအားလုံးတွင်အသုံးပြုပြီးထောက်ခံအားပေးသည်။ တကယ်လို့သင် CSS3 နဲ့ဘာဖြစ်နိုင်တယ်ဆိုတာကိုမသိခဲ့ရင်၊ exရာဝတီ CSS3 မှဖွင့်ထားသောသော့ချက်အင်္ဂါရပ်များနှင့်ပတ်သက်သောကောင်းမွန်သောအချက်အလက်ဆိုင်ရာအချက်အလက်များကိုအတူတကွပေါင်းစပ်လိုက်သည်။ ဥပမာ - border radius (rounded corners)၊ opacity (element မှတဆင့်မြင်နိုင်သည်)၊ border ပုံများ၊ နောက်ခံပုံများစွာ၊ gradients၊ font shadows ။ သင်နှင့်အတူဖွံ့ဖြိုးနိုင်မယုံနိုင်လောက်အောင်အကျိုးသက်ရောက်မှုအချို့ရှိပါသည် HTML5 နှင့် CSS3 တို့ကိုပေါင်းစပ်ထားသည်.
CSS3 ကဘာကြောင့်အရေးကြီးတာလဲ။ လက်ရှိတွင်ဒီဇိုင်နာများကသာမာန်အားဖြင့်နှစ်သက်ဖွယ်ကောင်းသည့်ဝက်ဘ်စာမျက်နှာများကိုအပြည့်အဝဒီဇိုင်းဆွဲရန်ဂရပ်ဖစ်၊ HTML နှင့် CSS ပေါင်းစပ်အသုံးပြုကြသည်။ ဂရပ်ဖစ်ဒြပ်စင်များအားလုံးကိုထောက်ပံ့ပြီးတာနဲ့နောက်ဆုံးမှာ Illustrator (သို့) Photoshop ကိုဖယ်ရှားပြီး browser (ဘရောက်ဆာ) ကကျွန်တော်တို့လိုချင်တဲ့ဂရပ်ဖစ်နဲ့အလွှာတွေကို render လုပ်နိုင်ပါပြီ။ ၎င်းသည်ဆယ်စုနှစ်တစ်ခုအကြာအဝေးကြီးရှိနေ ဦး မည်ဖြစ်သော်လည်းကျွန်ုပ်တို့ပိုမိုနီးကပ်လေလေကျွန်ုပ်တို့တည်ဆောက်နိုင်သည့်ဆိုဒ်များနှင့်ပိုမိုလွယ်ကူစွာသူတို့ပျံသန်းရန်ပိုမိုလွယ်ကူလာလိမ့်မည်။